Immisa qoraal ah oo Blog ah? | Martech Zone
Su’aal xiiso badan ayaa maanta la iisoo diray waxaanan jeclaystay inaan idinla wadaago dadweynow si aan fikirkaaga u helo. Ma jirtaa hab fudud oo lagu sheegi karo inta boggaga ay ku qoran tahay qoraallada qof leeyahay?
Iyadoo WordPress, waa quruxsan fudud (laga yaabee inuu aad u fudud yahay). Isku duubista qoraal kasta waa div oo wata Aqoonsiga Boosta. Aqoonsiga Boostadu wuxuu la mid yahay tirada boostooyinka. Waad ku mahadsan tahay xisaab-celin! :) Waxaan xoogaa la yaabay in tani aysan ahayn cufiyay wax yar.
Dabcan, tani ma tixgelinayso qoraallada aad tirtirtay, laakiin waa qiyaas qiyaas ahaan u dhow.
Iyada oo la adeegsanayo barnaamijyada wax lagu qoro, sida Blogger, waa wax aan macquul aheyn tan iyo markii POSTID loo qoondeeyey dhammaan baloogyada:
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud ee aan isticmaalo waa inaan si fudud ugu sameeyo baaritaanka goobta Google. Waad burburin kartaa sanadka iyo inta farriimood ee gaarka u ah sanadka oo dhan:
Waxaan ka raali gelinayaa Paul Dunay (weyn Podcasts suuqgeynta!) horay. Waxaan ku ogaan karaa baaritaanka, anigoo adeegsanaya sanadka, in Bawlos leeyahay 125 qoraal. Waxa uu lahaa 50 sanad ka hor iyo 32 ilaa hadda 2008. Nooc dhuumaaleysi ah, huh?
Miyaad heshay siyaabo fudud oo aad ku sheegi karto tirada qoraallada lagu qoro baloogga meeraha kale?
Tags: clipsyncpr qaybintaisku mid ahBartilmaameedka Teknolojiyadawordpress sida loo sameeyo
Waxaa laga yaabaa Waqtiga dib looga fikirayo Istaraatiijiyadaada Marka ...
May 29, 2008 at 6: 54 AM
Had iyo jeer waad ku ordi kartaa amar Lynx adoo adeegsanaya aalad amar ah si aad u abuurto dhammaan xiriiriyeyaasha la helay ka dibna aad u tuurto wc -l.
Kinda sida isticmaalka dubbe si aad ugu riixdo shandad. 🙂
Kaftankayga subaxnimo intaanan seexan kumbuyuutarkeyga, Barbara
May 29, 2008 at 7: 25 AM
Qoraal weyn iyo su'aal weyn Doug
Waxay umuuqataa inaan sifiican uguhesho boggeyga!
Waad ku mahadsan tahay sheegista
May 29, 2008 at 7: 29 AM
Waxaan u baahanahay blog ku saleysan blogger tusaale ahaan adigana taada ayaa maskaxda ku haysay.
Maaha wax ku saabsan tirada - tayada qoraaladaada iyo waqtiga aad ku qaadato inaad ku saxdo oo aad ku dhajiso ayaa muuqata!
May 29, 2008 at 8: 09 AM
Ama - oo waxaan ogahay inaanan haysan wax xal fiican ah sida raadinta Google iyo amarrada gaarka ah ee Lynx - waxaad kaliya eegi kartaa arjiyadaha oo muujinaya tirada dhambaallada bil kasta / sanad kasta, oo ku soo wada koobo qalin iyo warqad. 😀
May 29, 2008 at 7: 52 PM
Ku qor Douglas Karr: Cyber-Stalker!
Kaliya qoraal, waxaa jira dhowr sababood oo MySQL ay uga boodi karto tiro-xisaabeed sidaas darteed lambarka boostada waa suurtagal ugu badnaan, maahan tiro sax ah. Kaliya FYI.
May 29, 2008 at 10: 11 PM
Qabsasho wanaagsan Doug, ma aanan ogeyn inaad sidan kuheli karto - si fudud sidoo kale!
Haddii balooggu qariyey iskuxirayaasha arjiga oo aan doonayo inaan tijaabiyo haddii uu yahay baloog cusub oo caddaalad ah ama aan ahayn (ama kaliya mareegaha spam ee leh qoraallo kooban), waxaan badiyaa riixaa badhanka RSS ee kujira boggeyga Firefox si aan u eego quudinta . Maaddaama asalka loogu talagalay qoraallada 'RSS RSS' ay yihiin 10 (oo badanaaba aan la taaban), qoraal kasta oo ka yar tan tan quudinta ayaa badanaa ii sheegi doona tani waa degel cusub oo cusub (iyo in badan oo ka mid ah boggaga spam ayaa wali leh 'hello adduunka' halkaas oo ah tii ugu horreysay boostada).
Gebi ahaanba aqoon ma aqaan. Fikradaha kor ku xusan ayaa aad waxtar badan u leh!